China Natural Muscovite mica powder ifektri kanye nabaphakeli | I-Huajing
IHuajing grade cosmetic muscovite mica yamukela izinto zokusetshenziswa zaseChina, amaminerali avela eLingshou County, esifundazweni saseHebei, eChina. Imayini inelayisense yezimayini. Izinto zokwakha azinayo i-asbestos, insimbi esindayo ihlangabezana nezidingo zezimonyo.
I-WM-60 isiliva elimhlophe 82 kuya ku-85 150 ～ 170 7 ～ 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 60 0.22 ukubenyezela I-eye shadow
WM-100 isiliva elimhlophe 82 kuya ku-85 90 ～ 100 7 ～ 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 60 0.22
WM-200 isiliva elimhlophe 84 kuya ku-89 30 kuya ku-40 7 ～ 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 70 0.20
I-WM-325 isiliva elimhlophe 84 kuya ku-89 18 ～ 23 7 ～ 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 80 0.16 ukukhanya okukhulu isisekelo, iso lesithunzi, ukhilimu we-BB, ukhilimu we-CC, i-blusher
WM-600 isiliva elimhlophe 84 kuya ku-89 9 ～ 12 7 ～ 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 90 0.14
I-WM-1250 isiliva elimhlophe 83 ～ 88 6 ～ 9 7 ～ 8 ≤1 ≤1 ≤10 ≤3 ＜ 0.5 70 0.12
SiO2 Al2O3 I-K2O Na2O MgO I-CaO I-TiO2 I-Fe2O3
refractoriness umbala Ubulukhuni bukaMohs Coefficient nokunwebeka ukwenza izinto obala Iphuzu lokuncibilika amandla okuphazamisa ubumsulwa quotient
650 ℃ Isiliva elimhlophe 2.5 （1475.9 ~ 2092.7） × 106Pa 71.7 ~ 87.5% 1250 ℃ 146.5KV / mm > 99.5%
I-Huajing ibanga lezimonyo i-muscovite mica yamukela izinto zokusetshenziswa zamaminerali zaseChina, amaminerali avela eLingshou County, esifundazweni sase-Hebei, eChina. Imayini inelayisense yezimayini. Izinto zokwakha azinayo i-asbestos, insimbi esindayo ihlangabezana nezidingo zezimonyo .Ngemva kokuhlanzwa, ukuwashwa, ukugaywa, ukwahlukaniswa kwe-hydraulic, inzalo ephezulu yokushisa, ekugcineni imikhiqizo ingumnikazi wenzuzo ethambile, ebushelelezi, ekhazimulayo ephezulu, ubukhulu bobukhulu obukhulu, nesikhumba .
Imikhiqizo ingahlangabezana nezidingo ezi-2 ezihlukile: i-matte ne-bright.Usayizi wemikhiqizo usukela ku-5μm～Yiqiniso, imikhiqizo ingakhiqizwa ngokuya ngemfuneko yekhasimende yenani lokumunca uwoyela noma isicelo esikhethekile sombala .Namuhla, i-cosmetic grade muscovite esetshenziswa kakhulu kusisekelo, iso lesithunzi, i-blusher, ne-talcum powder, njll.
Yini I-Mica Powder Enayo Esenzweni Sezimonyo?
I-Mica ingumkhiqizo wamaminerali wemvelo onokuqina okuphezulu kwamakhemikhali futhi iyinto efakwe ngokuphelele, ngakho-ke iphephile, ayinabuthi, ayinabungozi futhi ilungele izimonyo. I-Mica ingenye yezingxenye zegranite, futhi ukuzinza kwayo kwamakhemikhali kuyefana nalokho kwegranite.
I-Mica wafer ingavikela imisebe ye-ultraviolet ne-infrared, ngakho-ke iyi-ejenti enhle kakhulu elwa ne-ultraviolet yezimonyo. Ngoba imvelo emsulwa, ayinabuthi futhi ayinabungozi, inezinzuzo ama-synthetic organic anti-ultraviolet angenazo. Ngoba isicwecwe sincane ngokwedlulele futhi nekhono lokumboza liqine ngokweqile, kudingeka inani elincane kuphela lale mikhiqizo ukwakha ungqimba olungabonakali lomvikeli we-anti-ultraviolet kanye nokukhanyisa ebusweni besikhumba.
Ngoba i-mica wafer ilungile futhi ukumbozwa esikhunjeni kuyayeka, akuthinti ukuphefumula kwesikhumba futhi kwenza isikhumba sizizwe sikhululekile.
Umswakama awukwazi ukungena esikhunjeni se-mica, esingavimbela ukuhwamuka komswakama wesikhumba lapho sisetshenziswa kwimikhiqizo yokuthambisa.
Ukukhiqizwa umthamo: 1500tons / ngenyanga
Ukupakisha: 500KG / 25KG / 20KG, (PP noma PE isikhwama)
Langaphambilini Zokwenziwa mica powder
Olandelayo: calcined mica powder
I-Dry Ground Muscovite Mica
IMuscovite Kanye nePhlogopite Mica
IMuscovite Phlogopite Mica
Indawo Emanzi Muscovite Mica